Clomiphene Citrate (Clomid) Soo-saareyaasha budada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Kiniiniga citrate ee Clomiphene wuxuu ahaa daawaynta ugu ballaaran ee loo adeegsado bacriminta sanadaha hore 40. Clomiphene wuxuu ahaa hormar isa soo taraya oo ku saabsan daawada taranka isla markaana si dhakhso ah u noqday caan ka dhalatay ugxan la'aanta, sababtoo ah fududeynta maamulka iyo saameynta ugu yar. Si kastaba ha noqotee, letrozole, aromatase inhibitor, sidoo kale waxay wax ku ool u tahay soo saarista taranka ee haweenka qaba cudurka kansarka ugxanta ah (PCOS). Xogta la heli karo waxay soo jeedineysaa in dhalmada nool ay korodhsanayso kororka chromipole, iyo khabiiro badani waxay hadda soo jeediyaan letrozole sida daaweynta koowaad ee haweenka qalafsan ee PCOS.
Qalabka Clomiphene Citrate (Clomid) budada (50-41-9) video
Root Clomiphene Citrate (Clomid) budada (50-41-9) Sharaxaad
Clomiphene Citratrate waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhalmo la'aanta haweenka. Waxay ka shaqeysaa kicinta korodhka qiyaasta hoormoonada kaas oo taageera kobaca iyo sii daaya ukunta baaluqa (qoynta). Daawadan laguma talin karo dumarka ay ugxan-yareenku si toos ah u dhigin ukumaha (fayruuska hore ama foosha).
Kalluunka Clomiphene Citrate (Clomid) budada waa qalab afka laga qaato, aan lahayn steroidal, kiciyaal dhalaalaya oo u shaqeeya sida habka xajinta xayawaanka xayawaanka (SERM). Clomifene wuxuu u horseedi karaa ugxan badan, sidaa awgeedna wuxuu kordhiyaa khatarta uurka. Marka la barbardhigo FSH oo la daahiriyay, heerka xanuunka 'hyperstimulation syndrome' waa mid hooseeya. Waxaa laga yaabaa inay jirto halis dheeraad ah ee kansarka ugxan-sidaha iyo miisaanka. Clomifene wuxuu awood u leeyahay inuu isdhexgalo unugyada ku jira estrogen-receptor, oo ay ku jiraan hypothalamus, pituitary, ugxanuun, endometrium, xubinta taranka haweenka iyo makaanka. Waxaa laga yaabaa inay la tartanto estrogen for goobaha estrogen-qaabilsan-qabashada iyo waxay dib u dhigi kartaa dib-u-kabashada hindhadyaha hindhisto ee hormoonka ah. Clomifene waxay billaabaysaa dhacdooyin isdaba-marin ah oo lagu dhameeyo endocrine-ka oo lagu dhammaystirayo gonadotropin preovulatory-ka ah iyo dillaac baaxad leh. Dhacdadii ugu horeysay ee indho-indheeriyadeed, iyadoo ka jawaabeysa koorsada daaweynta qalabka isdifaaca, ayaa kor u kacday sii deynta gonadotropins pituitary. Tani waxay bilaabaysaa steroidogenesis iyo folliculogenesis taasoo keentay in koritaanka qumanka ugxan-sidaha iyo kororka heerka qiyaasta estradiol. Ka dib qoynta, progesterone plasma progesterone iyo estradiol ayaa kor u kacda iyo dayrta sidii ay u ahaan lahaa wareegga caadada caadiga ah.
Xashiishka Clomiphene Citrate (Clomid) budada (50-41-9) Smamnuucista
Product Name Kalluunka Clomiphene Citrate (Clomid) budada (50-41-9)
Magaca Kiimikada Calaamadaha Clomifene; Clomid
Molecular Wsideed 598.089 g / mol
barafku Psaliid 116.5-118 ° C
Biological Life-Life 5-7days
milmi Hoos u dhig biyo, methanol, chloroform (wax yar), iyo DMSO (10 mM). Qasoobi waayey.
Application loo isticmaalo daaweynta dhalmo la'aanta haweenka
Nooca Clomiphene Raw Clomiphene Citrate (Clomid) (50-41-9)?
Kiniiniga citrada ah ee Clomiphene waa nooc ka mid ah kicinta ugxansidaha. Dhakhaatiirtu waxay caadi ahaan qoraan dawadan si ay u daaweeyaan dhalmo la'aanta dheddigga.
Kiniiniga citrate ee Clomiphene wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah estrogen, taas oo ah hoormoon dumar ah. Qaadashada daawadani waxay ku dhiirrigelisaa ugxantu, ama sii daaya ukunta ugxan-sidaha. Tani waxay gacan ka geysan kartaa kor u qaadista bacriminta dheddigga oo dhib ku ah inay uur yeelato sababtoo ah dhibaatooyinka ugxanta.
Sidee budada Clomiphene Citrate (Clomid) (50-41-9) shuqullada
Clomiphene waxay dhalinaysaa qanjirka pituitary ee maskaxda si loo xajiyo qadar kordhinta hormoonka kicinta (follicle stimulating hormone) (FSH) iyo LH (hormoonka hormoonka). Tallaabadani waxay kicinaysaa korriinka qanjirada ugxan-sidaha, sidaas awgeedna uuraysata.
Inta lagu jiro caadada caadada caadiga ah kaliya hal ukun ayaa la qalay. Isticmaalka clomiphene badanaa wuxuu keenaa ugxan-yari in ay soo saaraan laba ama saddex ukumood oo wareeg ah. Clomiphene waxaa loo qaataa hadal afka ah 5 waxaana uu firfircoon yahay kaliya inta lagu jiro bisha la qaado.
Kalluunka Clomiphene Citrate (Clomid) budada (50-41-9) Qiyaasta
Qiyaasta Caadiida Dadka Waaweyn ee Cunitaanka:
50 mg halmar hal maalin maalintii 5 maalmood. Daaweynta waa in lagu bilaabo ama ku dhowaadaa maalinta 5th ee wareegga caadada, laakiin waxaa laga yaabaa in la bilaabo wakhti kasta oo bukaanka ah iyada oo aan jirin dhiigbax dhawaan ah.
Haddii uur-qaadiddu dhacdo oo aan uur lahayn, illaa 2 koorsooyin dheeri ah oo ah xinjiraha 50 mgkiiba hal mar maalintii loogu talagalay maalmaha 5. Koorso kasta oo ku-xigta waxaa la bilaabi karaa horaantii 30 maalmood ka dib koorsadii hore iyo ka dib uurka.
Bukaannada badankood waxay qoynayaan kaddib marka koorsada koowaad ee daaweynta. Si kastaba ha noqotee, haddii bukaanku ku guuldareysto inuu qoyan yahay, koorso labaad oo ah 100 mg / maalin maalmaha 5 waxaa la siin karaa horaantii 30 maalmood kadib kooraska koowaad. Koorsada saddexaad ee 100 mg / maalin maalmaha 5 waxaa la siin karaa maalmo 30, haddii loo baahdo.
Kalluunka Clomiphene Citrate (Clomid) budada (50-41-9) isticmaalka
Caadirka Clomiphene / budada Clomid waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo dhalmo la'aanta haweenka. Waxay ka shaqeysaa kicinta korodhka xaddiga hoormoonada kuwaas oo taageera kobaca iyo sii deynta ukunta baaluqa (ugxanta). Daawadan laguma talin karo dumarka ay ugxan-yareenku si haboon u sameeyaan ukumaha (feejignaanta hoose ama foosha).
Soo iibso kalluunka Clomiphen Citrate (Clomid) laga bilaabo Buyaas.com